‘मनको बाबरी’लाई सफल पारेपछि सोच्नुपर्ला
एन्सर्ज गुरुङ चलचित्र निर्माता एवम् नायिका हुन् । दृढ इच्छाशक्ति भए जेसुकै काम फत्ते पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन गरेकी गुरुङले पछिल्लोपटक चलचित्र ‘मनको बाबरी’ निर्माण गरेकी छिन् । सामाजिक कुरीतिविरुद्धको चलचित्र ‘मनको बाबरी’ असार पहिलो हप्तादेखि कास्कीको पोखरामा प्रदर्शन सुरु भयो । ’असार ३ गते पोखराको रामबजारमा भएको पहिलो प्रदर्शनमा दर्शकले चलचित्र ‘मनको बाबरी’ राम्रो र कथावस्तुको प्रस्तुति शैली मन प¥यो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ’ निर्माता एवम् नायिका एन्सर्जले खुसीसाथ भनिन् । स्याङ्जाको खिलुङ देउरालीमा जन्मेकी एन्सर्ज केही वर्ष बुटवल बसिन् । अचेल ललितपुरमा बस्दै आएकी उनको ’प्हिरुमाला’ डेब्यू चलचित्र हो । सानैदेखि चलचित्र लाइन रुचाउने उनी साँच्चै आफ्नो सपना पूरा भएको बताउन पछि पर्दिनन् । कलाकारिताको अलावा समाजसेवामा समेत लागिपरेकी एन्सर्ज गुरुङसँग नयाँ चलचित्र मनको बाबरी र कलायात्राबारे गरिएको कुराकानी ।
चलचित्र प्रदर्शनीको अवस्था कस्तो छ ?
पहिलो प्रदर्शन राम्रो भयो । दर्शक, स्रोताले राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । चलचित्रको कथावस्तु नौलो किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ । मैले सोचेको भन्दा बढी दर्शक, स्रोताको उपस्थिति पनि रहयो । पहिलो प्रदर्शनीबाट जोश बढेको छ । नेपालका धरान, इलाम, रुपन्देहीका साथसाथै अन्य जिल्ला र भारतको देहरादुनबाट समेत हाम्रोतिर कहिले ल्याउनुहुन्छ प्रदर्शनमा भनिरहनुभएको छ । समय मिलाएर देश, विदेशमा मनको बाबरी चलचित्रलाई प्रदर्शनीमा लैजाने तयारी गरिरहेकी छु ।
मनको बाबरी चलचित्रको कथावस्तुबारे बताइदिनुहोस् न ?
नेपाली समाजमा रहेको विद्यमान कुसंस्कार, कुरीतिविरुद्धको सन्देश दिने चलचित्र हो यो । विशेषगरी, हिन्दु संस्कारमा औँसीको दिन जन्मिएका (औँसिया) छोराछोरीको विवाह नहुने, कथम्कदाचित विवाह भइहालेमा घरबार राम्रो नहुने । चेली पुगेको घरमा अनिष्ट हुने रुढिवादी सोचबाट उम्कनुपर्छ भन्ने सन्देश मनको बाबरीमा छ ।
यो चलचित्र निमार्णमा क–कसको भूमिका छ ?
कथा र स्क्रिप्ट लेखन माओत्से गुरुङले गर्नुभएको छ । सम्पादन राजेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ भने म आफैँ निर्माता हुँ । निर्माणसँगै मैले चलचित्र मनको बाबरीमा मेन हिरोइनको रुपमा अभिनय गरेकी छु । त्यस्तै, गमन घले मुख्य नायकको रुपमा हुनुहुन्छ । राजु गुरुङ, डीबी गुरुङ, एनबी गुरुङ, राजेन्द्र थापा, धनु गुरुङ, सूर्या सुनुवार, सोनी गुरुङ, सीता गुरुङलगायत कलाकारहरुले अभिनय गर्नुभएको छ । क्यामरामा हरि घले रहनुभएको छ ।
कुन–कुन ठाउँमा चलचित्र छायांकन गर्नुभयो ?
मेरै जन्मठाउँ स्याङ्जाको पेल्काचौर सेरोफेरो र कास्कीका विभिन्न प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण ठाउँहरुमा सुटिङ गरेका छौँ ।
किन, असारमासमा चलचित्र प्रदर्शनीको समय रोज्नुभयो ?
परिस्थितिले यस्तै बनायो । चलचित्र निर्माण सकेको २०७३ पुसमै हो । तर, प्राविधिक कारणले प्रदर्शनमा आउन ढिला हुनपुग्यो । असारबाटै प्रदर्शनी सुरु भएकोले अब नेपाल र विदेशका वि–विभिन्न ठाउँमा लैजानेछु ।
चलचित्र बनाउने मुडचाहिँ कसरी चल्यो ?
सानीछँदा नै कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने एकदमै रुचि थियो । टेलिभिजनमा सिरियल हेर्दा होस् वा हलमा चलचित्र हेर्दा, मलाई नि यस्तै अभिनय गर्न पाएहुन्थ्योजस्तो लाग्थ्यो । त्यत्तिबेलै म पनि सक्छु भन्ने आँट पलाउँथ्यो । बाल्यकालदेखिको सपना अहिले आएर पूरा भयो । यतिका वर्ष चलचित्र निर्माण, मोडलिङ गरिसके पनि म आफूलाई सफल भइसकें त भन्दिनँ । किनकी, यस क्षेत्रमा अझै संघर्ष बाँकी नै छ । आफ्नो रुचि एकातिर थियो भने नेपाली भाषा, मातृभाषा, संस्कार, संस्कृति जगेर्ना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लागेर यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । यसबाट आफ्नो ठाउँमा परिचित भएँ भने, चाहना पूरा भयो ।
पहिलो र दोस्रो चलचित्र निर्माण गर्दा कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ?
पहिलो चलचित्र प्हिरुमाला हचुवाको भरमा बनाइयो । त्यसको हरेकपक्ष कमजोर रह्यो । त्यताको कुरा अहिले नकोट्याउँ । तर, पहिलो चलचित्रबाट सन्तोष नमिले पनि आइडिया भने अवश्य पाएँ । त्यस्कै फलस्वरुपः ‘मनको बाबरी’ आएको हो ।
चलचित्र नचलेपछि ठूलै घाटा व्यहोर्नुपर्छ होला नि !
इच्छा, चाहना पूरा गर्न चलचित्र बनाएपछि घाटा, नाफाले केही फरक पर्दैन । चलचित्र निर्माण र अभिनय भित्री चाहना हो ।
चलचित्रमा कति लगानी गर्नुभयो ?
मेरो एकल लगानी हो । प्रदर्शनी छेउ आउँदा ४० लाख लगभग खर्च भइसक्यो ।
पहिलेको प्हिरुमालामा चाँहि ?
’गुरुङ, संस्कार, संस्कृतिमा आधारित प्हिरुमालामा तुल्सी ’गुरुङ र मेरो लगानी थियो ।
यत्रो लगानी गरेर चलचित्र बनाउनुभयो, पारिवारिक स्थिति कस्तो छ ?
घरपरिवारको राम्रो सपोर्ट छ । विशेषगरी मेरो श्रीमान्ले हेल्प गर्नुभएको छ । परिवारको बिनासपोर्ट म यहाँसम्म कहाँ आउन सक्थें र !
कलाकारितामा लाग्नुभएको चाँहि कति वर्ष भयो ?
म २०६४÷०६५ तिर यस क्षेत्रमा लागेकी हुँ । तर, विभिन्न कारणले बीचमा ग्याप भयो । गत वर्षदेखि फेरि निरन्तरता दिएकी हुँ ।
सुरुदेखि नै यस क्षेत्रमा हुनुहुुन्छ कि साइड जब पनि गर्नुभयो ?
म सामाजिक संघसंस्थामा पनि आबद्ध हुँदै आएँ । अहिले, समिदा वमेन फोरम डेभलपमेन्ट (एसडब्लूएस)को उपाध्यक्ष छु । हाम्रो संस्थाले एकल महिलाहरुका बालबच्चा संरक्षण गर्दछ ।
पहिल्यै चलचित्रमा हात हाल्नुभएको हो ?
होइन, सुरुमा मैले मोडलिङ गरें । सालैजो, कौडालगायत म्यूजिक भिडियोबाट करियर सुरु गरेकी हुँ । मलाई राजु गुरुङको ’तानसेनै बजार झिलिमिली’ले परिचित हुन सघायो ।
‘मनको बाबरी’ कहाँ–कहाँ शो गराउने योजना छ ?
पहिले पोखरा र काठमाडौंको प्रदर्शनी सकाउने । त्यसपछि नेपालका अन्य ठाउँमा प्रदर्शनी गर्दै विदेशमा हङकङ, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र अमेरिकालगायत देशमा लानेछु ।
अरु योजना पनि छ ?
पहिले ‘मनको बाबरी’लाई सफल पारौं । त्यसपछि सोच्नुपर्ला ।